आइतबार अक्टोबर 31, 2021 |
आइतबार अक्टोबर 31, 2021
विषय — अनन्त सजाय
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: अय्यूब5: 17
“"त्यो मानिस धन्यको हो, जब परमेश्वरले उसलाई सुमार्ग बताउनुहुन्छ। यसैले गुनासो नगर जब सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तिमीमाथि अनुशासन गर्नुहुन्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: हिब्रू 12 : 6-8, 11-13
6 प्रभुले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई अनुशासित गर्नुहुन्छ जसलाई आफ्नो छोरा ठान्नुहुन्छ प्रत्येकलाई उहाँ दण्ड दिनुहुन्छ।
1. मीका6: 8
2. भजनसंग्रह 1 : 1-6
1 धन्य हो त्यो मानिस जो अधर्मीहरुको सल्लाहमा हिँड्दैन, न त पापीहरुको बाटोमा उभिन्छ, न त तिरस्कार गर्नेहरुको आसनमा बस्छ।
2 धार्मिक मानिसले परमप्रभुको शिक्षा मन पराउँदछ। ऊ परमप्रभुको शिक्षाहरूको विषयमा रात-दिन सोचिरहन्छ।
3 यसकारण त्यो मानिस खोलाको पानीले सिंचेको रूख जस्तै बलियो हुन्छ ऊ ठीक समय फल दिने रूख सरह हो। ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मर्दैन उसले गरेको प्रत्येक काम सफल हुन्छ।
4 तर दुष्ट मानिसहरू त्यस्ता हुँदैनन्। दुष्ट मानिसहरूलाई भूसलाई जस्तै हावाले उडाई लान्छ।
5 यदि सबै धर्मी मानिसहरू अदालतको मुद्दा निर्णय गर्न भेला हुन्छन् तब दुष्ट मानिसहरू दोषी प्रमाणित हुनेछन। ती पापीहरूलाई निर्दोष भनेर न्याय गरिने छैन।
6 किन? किनभने परमप्रभुले धर्मी मानिसहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्ट मानिसहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ।
3. 1 राजा 16 : 29 (लाई:), 30-33
4. 1 राजा 17 : 1
1 एलिया तिश्बी गिलाद शहरको अगमवक्ता थिए। एलियाले राजा आहाबलाई भने, म इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छु। साँच्चै नै परमप्रभु जीवित रहनु भए जस्तैं, म प्रतिज्ञा गर्छु आउँदो केही वर्ष न ता पानी पर्छ न शीत नै पर्छ। जब म आदेश दिन्छु तब मात्र पानी पर्नेछ।
5. 1 राजा 21: 17, 18 (लाई:), 20-22, 27-29 (लाई:)
17 त्यस समयमा परमप्रभुले एलियासंग बोल्नु भयो। एलिया तिश्बीका अगमवक्ता थिए।
18 इस्राएलको राजा आहाब कहाँ जाऊ। उनी नाबोतको दाखबारीमा हुनेछन्। उसले त्यहाँ बारीको आफ्नो अधिकार लिइरहेको हुनेछ।
20 यसकारण एलिया आहाब भए कहाँ गए। आहाबले एलियालाई देखे र भने, मेरा शत्रु! तिमीले फेरि मलाई भेट्‌यौ। एलियाले उत्तर दिए, हो, मैले फेरि तपाईंलाई भेटाएको छु। तपाईंले तपाईंको सम्पूर्ण जीवन परमप्रभुको विरूद्ध पापहरू गरेर विताउनु भयो।
29 के तिमी देख्छौ, आहाब मेरो सामु कति विनम्र भएको छ। किनभने उसले आफैंलाई मेरो अघि नम्र बनाएको हुनाले, उसको जीवन कालमा ऊ माथि कष्ट ल्याउँदिन। उसको छोरा राजा नहुञ्जेलसम्म म पर्खिने छु। तब आहाबको परिवारमा म कष्ट ल्याउनेछु।
6. भजनसंग्रह2: 1-5, 10, 11
1 अन्य राष्ट्रका मानिसहरू किन रिसाउँछन्? किन तिनीहरू मूर्खतापूर्ण योजनाहरू बनाउँदै छन्?
3 ती अगुवाहरूले भने, परमेश्वर र आफूले रोजेका राजाको विरूद्ध विद्रोह गरौं तिनीहरूबाट अलग हौं।
5 तब परमेश्वर रिसाउनु हुन्छ अनि ती मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ।
7. रोमियो7: 18-20, 22-25 (लाई 1st .)
25 परमेश्वरले मलाई बचाउनु हुनेछ! म उहाँलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत धन्यवाद चढाउँदछु!
8. 1 शमूएल 16 :7(लागि)
7 … परमेश्वरले ती चीजहरू हेर्नु हुन्न हो मानिसहरूले हेर्छन्। मानिसले बाहिरी रूप मात्र हेर्छ, तर परमप्रभुले उसको हृदय हेर्नुहुन्छ। एलीआब त्यो ठीक मानिस होइन।
9. भजनसंग्रह 34 : 18-22
18 जब कष्टले सताँउछ केही मानिसहरू नम्र हुन्छन्। परमप्रभु तिनीहरूको नजिक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ।
19 धार्मिक मानिसहरूका धेरै समस्याहरू हुन सक्छन्, तर परमप्रभुले तिनीहरूका प्रत्येक समस्याबाट बचाँउनु हुनेछ।
20 परमप्रभुले तिनीहरूका सम्पूर्ण हड्डीहरू जोगाउनु हुनेछ। एउटा पनि हड्डी भाँचिन दिनु हुनेछैन।
21 तर दुष्टहरूलाई संकष्ट र दुःखले मार्ने छन्। असल मानिसहरूका शत्रुहरू ध्वंश हुने नै छन्।
22 जुन मानिसहरू उहाँमाथि आश्रित छन् परमप्रभुले आफ्ना दासहरूको प्राणको रक्षा गर्नु हुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई ध्वंश हुन दिनु हुनेछैन।
10. भजनसंग्रह 94 : 12
प्रेम को डिजाइन पापी सुधार गर्न को लागी हो। यदि यहाँ पापी को सजाय उसलाई सुधार गर्न को लागी अपर्याप्त भएको छ, असल मानिस को स्वर्ग पापी को लागी एक नरक हुनेछ।
ईश्वरीय विज्ञान पाप को प्रेम लाई बुझ्न को लागी, या त मृत्यु भन्दा पहिले वा पछि, पर्याप्त पीडा को आवश्यकता प्रकट गर्दछ। … दण्ड बाट बच भगवान को सरकार अनुसार छैन, किनकि न्याय दया को दासी हो।
हाम्रो अदालतले प्रमाण प्रमाणित गर्न को रूप मा साथै एक अपराध को आयोग लाई मान्यता दिन्छ। के यो स्पष्ट छैन कि मानव दिमाग एक दुष्ट कार्य को लागी शरीर लाई सार्नु पर्छ? के नश्वर दिमाग हत्यारा हैन? हात, नश्वर दिमाग बिना उनीहरुलाई निर्देशित गर्न, हत्या गर्न सकेन।
नश्वर दिमाग, कुनै कुरा छैन, हरेक मामला मा अपराधी हो; र मानव कानून सही अपराध को अनुमान, र अदालतहरु तर्कसंगत सजाय पारित, उद्देश्य अनुसार।
पदार्थ मा जीवन को विश्वास हरेक कदम मा पाप। यसले ईश्वरीय अप्रसन्नता निम्त्याउँछ, र यो येशूलाई मार्नेछ कि यो कष्टकर सत्य बाट छुटकारा पाउन सक्छ। भौतिक विश्वासहरु आध्यात्मिक विचार लाई मार्छन जब र जहाँ पनी यो देखिन्छ। यद्यपि गल्ती झुटको पछाडि लुक्छ र दोषी बहाना, त्रुटि सदाको लागी लुकाउन सकिदैन। सत्य, उनको शाश्वत कानूनहरु को माध्यम बाट, त्रुटि अनावरण। सत्यले पाप आफैंलाई धोका दिन्छ, र त्रुटि मा जनावर को निशान सेट गर्दछ। अपराध माफी दिने वा लुकाउने स्वभाव पनि दण्डित हुन्छ। न्यायको परहेज र सत्यको अस्वीकारले पापलाई निरन्तरता दिन्छ, अपराधको आह्वान गर्दछ, आत्म-नियन्त्रणलाई खतरामा पार्छ, र ईश्वरीय दयाको उपहास गर्दछ।
जो कोहि आफ्नो विकसित मानसिक शक्तिहरु को रूप मा एक पलायन अपराधी को रूप मा ताजा अत्याचार गर्न को लागी अवसर को रूप मा प्रयोग गरीन्छ कहिल्यै सुरक्षित छैन। भगवानले उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुहुनेछ। ईश्वरीय न्यायले उसलाई पराजित गर्नेछ। उसको पाप उसको घाँटी को बारे मा मिलस्टोन हुनेछ, उसलाई अपमान र मृत्यु को गहिराई सम्म तौल।
पापीले दुष्ट कर्म गरेर आफ्नै नर्क बनाउँछ, र सन्तले सही गरेर आफ्नो स्वर्ग बनाउँछ।
नश्वरमा उत्पन्न हुने दुष्ट विश्वासहरु नर्क हुन्।
झुटो सुखहरु जुन यस सपनालाई निरन्तरता दिन्छन् भन्दा कष्ट जो नश्वर दिमाग लाई उसको देहस्वप्न बाट जगाउँछ। पापले मात्र मृत्यु ल्याउँछ, किनकि पाप विनाशको एकमात्र तत्व हो।
उजागर र दुष्ट र रोग को सबै रूपहरु मा आफ्नो दाबी को निन्दा, तर उनीहरु मा कुनै वास्तविकता महसुस। एक पापी केवल उसलाई आश्वासन दिएर सुधारिएको छैन कि ऊ एक पापी हुन सक्दैन किनकि त्यहाँ कुनै पाप छैन। पाप को दावी तल राख्न को लागी, तपाइँ यसलाई पत्ता लगाउनु पर्छ, मास्क हटाउन, भ्रम को बिन्दु, र यस प्रकार पाप मा विजय प्राप्त र यसैले यसको असत्य साबित।
10. 327 : 1-13 (लाई 2nd .), 22-3
सुधार यो बुझेर आउँछ कि त्यहाँ नराम्रो मा कुनै स्थायी आनन्द छैन, र विज्ञान को अनुसार राम्रो को लागी स्नेह प्राप्त गरेर, जो अमर तथ्य लाई प्रकट गर्दछ कि न त खुशी न पीडा, भूख न जोश, कुनै पदार्थ मा वा अस्तित्व मा हुन सक्छ, जबकि ईश्वरीय मन सक्छ र खुशी, पीडा, वा डर र मानव दिमाग को सबै पापी भूख को गलत विश्वासहरु लाई नष्ट गर्दछ।
कस्तो दयनीय दृष्टि द्वेष हो, बदलामा आनन्द खोज्दै! नराम्रो कहिले काहिँ एक मानिस को अधिकार को उच्चतम अवधारणा हो, जब सम्म उसको राम्रो मा पकड बलियो हुन्छ। तब उसले दुष्टतामा आनन्द गुमाउँछ, र यो उसको पीडा बन्छ। पाप को दु: ख बाट बच्न को लागी पाप बन्द गर्न को लागी हो। अरु कुनै उपाय छैन।
सजायको डरले मानिसलाई साँच्चै इमान्दार बनाएको छैन। गलतको सामना गर्न र सहीको घोषणा गर्न नैतिक साहस चाहिन्छ। तर हामी कसरी त्यो मानिसलाई सुधार गर्न सक्छौं जसको नैतिक साहस भन्दा धेरै जनावर छ, र जो राम्रो को साँचो विचार छैन? मानव चेतना को माध्यम बाट, खुशी प्राप्त गर्न को लागी भौतिक साधनहरु को खोजी मा आफ्नो गलती को नश्वर लाई मनाउनुहोस्। कारण सबैभन्दा सक्रिय मानव संकाय हो। त्यो भावनाहरु लाई सूचित गरौं र नैतिक दायित्व को मानिस को सुप्त भावना जागृत गरौं, र डिग्री द्वारा, उसले मानव भावना को सुख को शून्यता र आध्यात्मिक भावना को भव्यता र आनन्द को जान्नेछ, जो सामग्री वा शरीर को मौन। तब उहाँ मात्र बचाउनुहुन्न तर मुक्ति पाउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ मा विश्वास गर्नुहुन्छ र जानबूझेर गलत अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक पटक मा तपाइँको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र सही गर्न सक्नुहुन्छ। पदार्थ पाप वा रोग को बिरुद्ध सही प्रयास को लागी कुनै विरोध गर्न सक्दैन, को लागी पदार्थ निष्क्रिय, दिमागहीन छ।
पाप, रोग, वा मृत्यु को लागी कुनै कथित आवश्यकता मा विश्वास नगर्नुहोस्, जान्नुहोस् (जस्तो कि तपाइँ जान्नै पर्छ) कि भगवान को एक तथाकथित भौतिक कानून को आज्ञाकारिता को आवश्यकता छैन, को लागी त्यस्तो कुनै कानून अवस्थित छैन। पाप र मृत्यु मा विश्वास भगवान को कानून द्वारा नष्ट गरीएको छ, जो मृत्यु को सट्टा जीवन को नियम हो, कलह को सट्टा सद्भाव को, मासु को सट्टा आत्मा को।
सत्य लाई उजागर गरौं र भगवान को आफ्नै तरीका मा त्रुटि लाई नष्ट गरौं, र मानव न्याय को ईश्वरीय ढाँचा दिनुहोस्। पापले यसको पूरा दण्ड प्राप्त गर्दछ, दुबै यो के हो र यो के को लागी। न्याय पापीलाई चिन्ह लगाउँछ, र परमेश्वरको मार्ग चिन्ह हटाउन को लागी नश्वर सिकाउँछ।
प्रेम को पौष्टिक सजाय को माध्यम बाट, हामी धार्मिकता, शान्ति, र पवित्रता को लागी मार्च मा अगाडि मद्दत गरीएको छ, जो विज्ञान को स्थलचिन्ह हो। सत्य को अनन्त कार्यहरु देखी, हामी पज, - भगवान मा पर्खनुहोस्। तब हामी अगाडी धकेल्छौं, जब सम्म असीमित सोच मोहित हिँड्छ, र अवधारणा अपरिभाषित ईश्वरीय महिमा सम्म पुग्न पखेटादार छ।